Ekuphileni, yini engase yenzeke - futhi ube nezikhathi ezinzima nezimnandi. Omunye isimo sinjalo nokulahlekelwa umsebenzi. Ososayensi baye bafakazela ukuthi okokuqala ngemva kokuba waxoshwa, umuntu usesimweni zokucindezeleka, bese, ngemva kwezinyanga ezintathu, waqala umsebenzi wokudala, kodwa ngemva kwezinyanga eziyisithupha kukhona lithathelwe isimo. Ngakho-ke, ngaphambi kokuba uvuke Labour Exchange, okuyinto nethemba langempela kakhulu yokuba "okungamahlalakhona" ukungasebenzi, thina kufanele ichaze inkambo kuhloswe ngazo ukuthi kutholakale umsebenzi omusha.
Izizathu ukuthi abantu ngokuvamile baphendukela Wobudlelwano Exchange, ungakwazi igama ezimbili. Yiqiniso, isizathu esiyinhloko Ukufuna usizo ekutholeni umsebenzi ofanele. Isizathu sesibili ukuthi ezinye abangasebenzi ngezinye izikhathi iba main, ukuthola namarhubhelo wokungasebenzi. Ngaphambi uvuka Labour Exchange, kuyinto efiselekayo ukuzinqumela ukuthi hlobo luni lomsebenzi oyowunikela kwemvume yakho. Kungenzeka ukuthi amaholo kuyoba yinto ekude kunezipho izinzuzo, esizokunikeza emakethe.
On inani usizo zikhokhelwe abangasebenzi kuthinta iholo, okuyinto icala ku indawo yokugcina umsebenzi, isikhathi nokungasebenzi kanye nobunjalo esifundeni. Lo mhlomulo kungaba isukela ruble ayizigidi 2-5. Le mali encane ibalwa ukuqinisekisa ukuthi abantu bazithole ngaphandle inkokhelo, wasala engasenabo ukuvikelwa isimo futhi wakwazi ukuthola umsebenzi omuhle. Kodwa onjani imali ngeke ukhokhele umsebenzi exchange, ngokuqinisekile ngeke engadingekile. Kulokho kudingeka imibhalo ngivuke Labour Exchange, into engcono esikhulumi ukwenaba exchange ngokwayo esifundeni. Iqiniso lokuthi kukhona umehluko wemisindo nemiqondo yamagama athile, okungase oyi-washaya ucingo wabonga ochwepheshe exchange, funda kusifunda ngasinye Labour Exchange. Hhayi ukuze uthole isimo lapho besanda kungeniswa exchange umshikashika ukuthi ubhalise njengomuntu umuntu ongasebenzi akakwazi, njengoba imibhalo eyengeziwe kodwa kudingeka noma nezitifiketi.
lula kakhulu futhi ngokushesha sizokwazi ukubhalisa uma pre-ucacise lokho kudingeka imibhalo ukuze ubuyele ku-exchange isitokwe. Ukuhlinzekwa wonke amasevisi zabasebenzi exchange kuphethwe umthetho kahulumeni efanele. Ukubhaliswa abangasebenzi yilona lodwa endaweni yabo yokuhlala.
Imibhalo main ayadingeka ukuze yokubhalisa kuyothathwa iphasipoti, umlando umsebenzi futhi idokhumenti imfundo. Ngaphambi uvuka Labour Exchange, izakhamizi, ngubani unokukhubazeka, ngaphezu imibhalo eyinhloko kudingeka ukuthi unikeze Uhlelo lokuhlumelelisa ezengeziwe, okuyinto abazitholile bekomiti wezokwelapha.
Ngezinye izikhathi ihhovisi abangasebenzi iphathwa izakhamuzi encwadini yomsebenzi ukuthi babe okufakiwe ngezilimi zakwamanye amazwe. Kulokhu, ngaphambi ukuvelela exchange zabasebenzi, babophekile self-ubheke umhumushi ukuhumusha wonke amarekhodi kwi isiRashiya. Khona-ke, kufanele ukuhumusha okuholela notarized. Uma Wobudlelwano Exchange amakheli isakhamuzi, okuyinto okokuqala ufuna umsebenzi, khona-ke akaphoqelekile ukuthi bathumele incwadi umsebenzi isitifiketi nomholo isilinganiso.
Izitifiketi ukuhambisana - sikhona ukuze imibhalo? Indlela hlola isitifiketi sokuhambisana?
Ukuqedwa LLC Amafomu zayo
Indlela ukubhalisa mathupha efulethini? Imibhalo sokubhaliswa efulethini
Kuyini ploskovalgusnye unyawo ezinganeni nendlela abaziphatha ngayo
Izinkantolo Ukudla eziyinxanxathela, isakhiwo esithombeni sabo. Ethengisa ukudla - kuyini?